တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀
Posted by pyaephyo on Oct 13, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
ကျွန်တော် တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးဟာ အင်မတန်မှ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်…ဆရာတွေကလည်း..သဘောကောင်းကြပါတယ်…ကျွန်တော် တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းက မိတ္ထီလာမြို့မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်လေးပေါ့….ရေကန်နှစ်ကန်လည်းရှိ်တယ်လေ….ခုံတန်းလေးတွေနဲ့ပေါ့…အတွဲလေးတွေကလည်း..ကိုယ်စီကိုယ်စီနဲ့ ထိုင်နေကြတာ..မိုးမမြင် လေမမြင်နဲ့….ကဲလို့ကောင်းနေတာပေါ့..M♥♥♥..ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း အုပ်စုကတော့…အားလုံးကို လိုက်စ လိုက်နောက်နဲ့ အချိန်တွေဖြုန်း..ပျော်စရာတော့ ကောင်းပါတယ်….ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ…ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့တယ်..တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ..ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာ ကူမဲက ကျောင်းသူတစ်ယောက်က ဆေးချနေတာကို တွေ့ရတာပဲ…တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်ဗျာ…ဟောနောက်တစ်ခုကတော့..အခန်းထဲမှာ အတွဲတစ်တွဲ မိုးမမြင်လေမမြင်နဲ့..ကောင်းကောင်းကြီး လိင်ဆက်ဆံတာတွေ့ရတာဘဲ..၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်ကပေါ့…ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာတော့မပြောတော့ပါဘူး…ခုခေတ်မှာ တော်တော်လေးဆိုးလာတာက…အိမ်ထောင်မကျသေးဘဲ လိင်ဆက်ဆံတာက တော်တော်များလာတယ်ဗျ…မင်္ဂလာလည်းဆောင်ရော..ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ သတို့သမီးမှာ…ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလည်း….ဟုတ်တယ်မလား….မကောင်းပါဘူး..မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အဲ့လိုလုပ်တာ…တော်တော်လေး သိက္ခာကျပါတယ်….လူကြီးမင်းတို့ကော ဘယ်လိုထင်လဲ?
ိကျွန်တော်ထက်ပြောပြရအုန်းမယ်ဗျ…အဝေးသင်တွေကျတော့ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့….ကြားဖူးတာပေါ့..စာဆိုလေးနဲ့ဗျ..အဝေးသင် အလိုးတင်တဲ့လေ…အော်..ကျွန်တော်လည်း အစကတော့.မယုံဘူးဗျ..သူတို့က တစ်လနှစ်လဘဲတွေ့ရတာဆိုတော့….ကဲချင်တိုင်းကဲတာပေါ့…နောက် ကျောင်းကစာမေးပွဲလည်းဖြေပြီးရော..ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ပြန်သွားတာ..ကျွန်တော်လည်း မြင်ဖူးမှ ယုံတော့တာဘဲ….ဟုတ်တယ်လို့ စာဆိုကမှန်တယ်ဆိုတာ လက်ခံခဲ့ရတာပေါ့…….ကျွန်တော် အမှာစကားတစ်ခွန်းတော့ ရေးချင်တယ်…ကိုယ့်လူမျိုးတွေအဲ့လိုလုပ်တာမကောင်းပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ….
View all posts by pyaephyo →
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် ရေးရေးဘယ်လိုပြောပြော မလိုက်နာပါဘူးကွာ။ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ရည်းစားစကားစပြောတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဗိုက်ကြီးတာ လိင်ဆက်ဆံတာက မဆန်းတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရတနာပုံမှာလည်း ရှိပါတယ်။ မြင်နေကျအရာတွေဆိုတော့လည်း မဆန်းတော့ပါဘူး အစ်ကိုရေ။့အဆောင်သူတွေဆိုပိုဆိုးတယ်။ နောက်ပေါ်ထွက်လာမဲ့
မြန်မာမိန်းကလေးတွေသာ မကူးစက်ပါနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာပါနော် … ဟွန်း … အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟ …
မမလေးကို အရင်က မမြင်ဘူးဘူး ..
အခု ဘယ်က ပေါ်လာတာလဲဟင် ..
ဒါပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်သက်က ရင့်နေလောက်ပါပြီ….1019 ဆိုတော့လေ
ဖြစ်နှိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုချင်တယ် ..
မမလေး ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းပေးပါလားဟင် …
မြန်မာကားတွေထဲမှာဆိုရင် အိမ်ဖော်တွေက အိမ်ရှင်မင်းသမီးကို မမလေးလို့ ခေါ်ကြတာဆိုတော့
အမကိုတွေ့ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်အားငယ်တာပဲ။ ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ အိမ်ဖော်ဖြစ်နေသလိုလို
.. သူ့တရုတ်နာမယ်ကို.. သီလရှင်ခံပြီး ..ပြောင်းထားတာ..။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေ ကဲတာတော်သေးတယ် … အခုဟာက …အထက်တန်းကလေးတွေတောင် … လက်တည့်စမ်းတဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီ … ။ မိဘနဲ့သားသမီးကြား အပြန်လှန် နားလည်မှုယူပြီး သေချာကိုင်တွယ်ပါမှ မိမိတို့ ကလေးတွေ .. အနာဂတ်မပျက်ဆီးရမှာ .. ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ … ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး စာသင်ခန်းထဲ ထင်တိုင်းကြဲနေတာကတော့ … အရှက်မဲ့လွန်းပါတယ် … ။
‘အတွဲတစ်တွဲ မိုးမမြင်လေမမြင်နဲ့..ကောင်းကောင်းကြီး လိင်ဆက်ဆံတာတွေ့ရတာဘဲ”
မိတ္ထီလာ တက္ကသိုလ် ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွေကတော့